We She Me: မဏ္ဍပ်တိုင် တက်ခြင်း
nu-san - 8/19/08, 1:27 PM
Andy ရေ.. မျက်နှာငယ်ရပါ့နော်. အဟိ.. Top 10 ၀င်အောင် ကြိုးစားရမယ်နဲ့တူတယ်။ :D Andy က စာရင်းနဲ့ စနစ်တကျ လုပ်ထားတော့ ကိုယ့် blog ကို ဘယ်သူလာတယ်။ ဘယ်က လာတယ်ပါ အတိအကျပြောနိုင်တယ်နော်.. statistic ကျွမ်းတယ်။ အမ blogကိုလည်း အများဆုံးလာကြတာ Andy ဆီကပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းဆို အမ စာသိပ် မရေးနိုင်တော့ဘူး။ နောက်လတွေဆို blog တောင် ဆက် blog ဖြစ်ပါ့မလား မသိဘူး။ :)
မဇနိ - 8/19/08, 2:38 PM
ညီမတို့ဘလော့ဂ်ကို အများဆုံးလာတာလဲ အစ်ကိုအန်ဒီ ဆီကပဲ။ ညီမကလည်း တနေ့တနေ့ ဘယ်ကလာလဲ၊ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ကြည့်ပြီး အလည်လာတဲ့သူများရင် ပျော်တာပေါ့နော်။ အစ်မနုစံမလာတာကြာရင် သူမအားဘူးလားမသိဘူး။ တရက်ကနှစ်ရက်မလာတာတွေ့ရင် မနေနိုင်ပါဘူး။ သူ့ဘလော့ဂ်မှာ သွားမေးမိတာ။ ဒီ wesheme ကိုလည်း တနေ့မလာရရင် မနေနိုင်ပါဘူး။ “အစ်ကိုအန်ဒီ့ပို့စ်တွေ အသစ်တက်လားချောင်းချင်တဲ့အခါ“၊ “ကလေးပုံလေးတွေလာကြည့်မိတဲ့အခါ“၊
“အစ်ကိုအန်ဒီနဲ့အစ်မတို့ရဲ့ ပြန်ရေးတဲ့ကွန်းမန့်တွေကိုဖတ်ချင်တဲ့အခါ“၊ “သူများပို့စ်တွေသွားချင်တဲ့အခါ“၊ “ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ပို့စ်တက်နေပြီလားသိချင်တဲ့အခါ“၊ “ပုံလေးဘယ်လိုပေါ်လဲသိချင်တဲ့အခါ“ စတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေများစွာအတွက် မလာရမနေနိုင်ပါဘူး။
ပန်းခရမ်းပြာ - 8/19/08, 4:00 PM
မKOM ပြောသလို ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရသလိုပါပဲ။
အရမ်းအရမ်း ဝမ်းသာတာကိုတော့ အောင့်မထားနှိုင်တော့ဘူး။
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း ပြောချင်၊ မှတ်တမ်းတင်ရင်း နဲ့လည်း ကြွားချင် ...
ဒါနဲ့ပဲ ပို့စ်တစ်ပုဒ် ရေးလိုက်မိတာ။
ရှဲရှဲနီပါ ကိုအန်ဒီရေ ....။
၀ါဝါခိုင်မင်း - 8/19/08, 5:01 PM
ဟီးဟီးဟီး ကိုအန်ဒီ ရေ..
နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာက ကျမ ကိုပြောတာများလားမသိဘူးနော်။
ကျမ ကိုလည်း ကိုအန်ဒီ ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေလိုပဲ ခင်ခင်မင်မင် ဆက်ဆံ
နိုင်ပါတယ်ရှင်။ ကျမ ကကျမအမျိုးသားမြှောက်ပေးလို့ဘာမှန်မသိပဲ
ဘလော့ဂါ လိုက်ရင်း ဘလော့ဂ်လောကထဲရောက်လာတာပါရှင်။
သိလွန်း တတ်လွန်းနေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။အားတဲ့ အချိန်တွေမှာ ပို့စ်
လေးတွေရေးရင်း မထင်မှတ်ပဲ အားပေးတဲ့သူတွေ ရှိလာလို့ ၀မ်းသာ
ပြီး ပို့စ်လေး ရေးဖြစ်သွားတာပါရှင်။ :D ပထမတော့ ရေးပြီးမတင်တော့
ပဲ draft ထဲမှာပဲ save လုပ်ထားမလို့ပါပဲ။ဒါပေမယ့် ရေးပြီးနေတော့
တစ်ရက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် တင်လိုက်ဦးမယ်ဆို ပြီးတင်လိုက်တာ..ဒါပေ
မယ့် ကိုအန်ဒီ က comment လာရေးသွားပေးလို့ draftထဲ မ saveဖြစ်
တော့ပဲ ဒီအတိုင်းပဲ တင်ထားလိုက်တော့မယ်။ ဟဟား ကိုယ်ကိုယ် ကိုယ်
ကြွားသလိုတော့ဖြစ်နေလို့ ရှက်တော့ရှက်ချင်သလိုပဲ..ဒါပေမယ့် မရှက်
တော့ပါဘူး..တကယ်ပဲ ပျော်လွန်းသွားလို့ပါ.. :D အားလုံး နားလည်ပေး
ကိုအန်ဒီ နဲ့ မိသားစု မိတ်ဆွေများအားလုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။
Andy Myint - 8/19/08, 8:00 PM
မနုစံက Top 10 ထဲ ၀င်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ပို့စ် အသစ် မတက်လာသေးလို့ ဖြစ်မယ်။ အခြေအနေ ပေးသလောက်ပေါ့ အစ်မရယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ထူးခြား ဖြစ်စဉ်ဆိုရင် သံချောင်းခေါက်လိုက်ဦးတဲ့ ကလေးအမေက လှမ်းပြောနေတယ်။
ဟုတ်တယ် မဇနိရေ... အဲဒါတွေ ကြည့်ရတာကိုက တစ်လုပ်။ ဘာကြောင့်လာလာ လာသာလာဗျို့။ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဟုတ်တယ် အပျော်ပေါ့ ပန်းခရမ်းပြာ။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒါကြောင့် ရေးလိုက်တာ။
ဟီးဟီး ဟုတ်တယ် မ၀ါဝါခိုင်မင်း။ ကျွန်တော် ဖတ်လိုက်ကတည်းက သဘောပေါက်သွားတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ ဒီနေ့တော့ အပျော်တွေ ကူးစက်သွားတယ်ပေါ့။
မြရွက်ဝေ - 8/19/08, 10:11 PM
ဘလော့ကို Google Analytics ထဲ ထည့်ကြည့်တာ မကြာသေးဘူး။ ဟိုတပတ်က စစ်ကြည့်မှဘဲ weshemeရယ် o-wayရယ် မနုစံ ဆီကနေ အလာများမှန်း သိရတော့တယ်။ ကမျောက်ကချောက်ရေးနေတော့ လူသိပ်လာဖတ်တယ် မထင်တာလဲပါတယ်။ ခုလို ဒီဘလော့တွေက လာမှန်းသိတော့မှ စာရေးတာလည်း သတိထား ကြိုးစားချင်စိတ်လေး ဖြစ်လာတာ အမှန်ဘဲ။ မဇနိ ပြောသလိုဘဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လာဖတ်တယ်။ ပို့စ်အသစ်မရှိလည်း ဘေးကနေ ဘာလေးတွေ တက်နေပြီလဲ လာချောင်းတာ တခါတလေ တနေ့ ဘယ်နှခါမှန်းမသိဘူး။ အရင်က ဒီကပို့စ်တွေဖတ်ရင် အထာမသိတော့ အပြည်အစုံဆက်ဖတ်ရန်နှိပ်လိုက်ရင် ကျန်ပို့စ်တွေ ပိတ်သွားလို့ နောက်ဆိုနပ်သွားတယ်။ right click နဲ့ open link in new tab နဲ့ဖတ်တော့ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ဘာပြောပြော ကိုAndy တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘလော့လောကက ရွှေအမြုတေလို့ ပြောလို့ရတယ်နော။:D
bOASTER - 8/20/08, 12:17 AM
I do appreciate ur boasting technique
Andy Myint - 8/20/08, 10:12 PM
ကျွန်တော်က ကိုယ့်ဘလော့ဂ်က လင့်ဆိုရင် နောက်ထပ် ၀င်းဒိုး တစ်ခု ထပ်မဖွင့်ဘူးဆိုပြီး တွေးထားလို့ မမြရွက်ဝေ။ ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေရင် ပြောင်းလိုက်မယ်လေ။ အခုလို့ အကြံပေးတာလည်း ကျေးဇူးပါ။
Beat me boasting, bOASTER :)
ပီတိ - 8/21/08, 2:38 AM
ကျွန်တော့်ဘလော့ကိုညွှန်းတဲ့အထဲမှာလည်း wesheme နဲ့ ပန်ဒိုရာက အများဆုံးပဲ... ကိုအန်ဒီ ကြိုးစားပြီး blog roll လုပ်ထားတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆို template ပြင်ရမှာပျင်းတာ နဲ့ မလုပ်ဖြစ်ဘူး... နေ့တိုင်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်...
sandar - 8/21/08, 6:50 AM
်ကိုအန်ဒီရဲ့ feed roll က အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။
အရင်တုန်းက feed roll တွေရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို မောက်စ်နဲ့ ထောက်လိုက်ရင် xx click hourly ဆိုပြီးပေါ်တယ်။ click အများကြီးရှိတာဆို ဘာများလဲဆိုပြီး သွားကြည့်တယ်။ ခုနောက်ပိုင်း အဲလို မပြတော့ဘူးနော်။
စကားမစပ် ဟင်းလေးဘာလေး ချက်ပါဦး
Andy Myint - 8/21/08, 10:03 PM
ဟုတ်ပါ့မလား ကိုပီတိ... ကျွန်တော် ကိုပီတိ Feed တွေ Subscribe မလုပ်မိဘဲ လွတ်သွားတာ အတော် ရှိတယ်နော့်
ဟုတ်တယ် မစန္ဒာ ကျွန်တော်လည်း သတိထားမိတယ်။ ဘယ်လို ပြင်ရမလဲ မသိလို့။
Kay - 8/24/08, 6:53 PM
ကိုအန်ဒီရေ..ခရီး ထွက် နေလို့..ခုမှ..အတိုးချ လာဖတ် တယ်။ ကိုယ့်နံမယ် တွေ့ တာနဲ့.. ဟ- သွားပွားအုံး မှ ဆို ပြီး..ဘလော့ပေါ် ဆင်း လာတာ။း)
ကျ မ က တော့.. stat count နေ့တိုင်း မကြည့် ဖြစ်ပေမဲ့.. ကြည့် တိုင်း ကိုအန်ဒီ ဆီက လာတာ များ လို့.. ကျေးဇူး တင် ကြောင်း ခု ပြော ပါရစေ။
ဟုတ်ပါ့နော်..ကျမ တို့တွေ..နောက်မို့ဆို..ဘယ်သူ လာ ဖတ် မှန်း..ဘယ်ကလာ မှန်း..မသိ..ဘယ်က ချောင်းကြည့်ရ မှန်း မသိဖြစ်နေမှာ..။
ဒါနဲ့.. ကျမ ခရီး ထွက် နေတုန်း..အပြင် စက်တခု ကနေ..တက်ကြည့်တော့..ကိုအန်ဒီ ရဲ့..ဒီလောက် လူကြိုက် များ တဲ့..ဘလော့ ကို.. တိုက်ရိုက် ဇော်ဂျီ ဖွန့် မမြင် နေ ရ လို့..အံ့ သြ နေတယ်.. EOT တို့ ဘာ တို့..လုပ်မထားဘူးလား..( နားလည်လို့တော့မဟုတ်..ကြားဖူး တာ ပြောတာ..ကျမ ဟာ တော့..ရန်အောင်ပေးတဲ့ နည်း အတိုင်း လုပ် ထားတော့..ဘယ်စက်က..ဖတ်ဖတ် ရ နေတယ်..) နည်းပညာ ဒီလောက် ဆန်းသစ် ရေးသား နိင်တဲ့ ..ဘလော့ ကာ ရဲ့ ဘလော့ မို့.. ပါ။ just wondering.. :P
Moe Cho Thinn - 8/25/08, 8:35 AM
ကိုအန်ဒီတို့ကတော့ အဲဒီလို ဘယ်ကလာလဲ၊ ဘယ်သူလဲ ကြည့်တတ်တော့ အရမ်းဟန်ကျပါတယ်။ ကျမကတော့ ဒါမျိုးတွေ မကျွမ်းကျင်ဘူး။ ဘယ်လိုကြည့်ရလဲ လဲ မသိဘူး။ မိတ်ဆွေတယောက်က ကောင်တာ တပ်ပေးထားလို့ သိရတာ။ အဲဒါလဲ ဘယ်လိုမျိုး ရေတွက်နေသလဲ မသိသေးဘူး။ ငတုံးတွေထဲမှာသာ စာရင်းတို့လိုက်ပါတော့။ ကျမက လင့်ခ်ထားတာ နှိပ်ရင်တောင် တုန်တုန် တုန်တုန် ဖြစ်နေတာပါ :P
ကျမစာတွေ ဖတ်ညွှန်းလေး လုပ်ထားလို့ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ ကျမဆီကိုလဲ ကိုအန်ဒီ့ဆီက လာကြတာပဲ ဖြစ်မှာပဲ။
Andy Myint - 8/25/08, 8:40 PM
ရပါတယ် မကေရယ် This man နဲ့ this man ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောစရာ မလိုပါဘူး။ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော့် ဘလော့က လေးတာနဲ့ EOT တော့ မထည့်တော့ဘူး။
အစ်မ လာလည်လို့ ၀မ်းသာတယ် မမိုးချိုသင်း။ အစ်မစာတွေကတော့ ကြိုက်ပြီးသားပဲ။ ကျွန်တော့် မိန်းမကလည်း အရမ်းကြိုက်တာ။ ဘလော့ ဖတ်သူတွေ အားလုံးရော ကြိုက်ကြမှာ။
little moon - 8/26/08, 3:59 PM
ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘလော့ကို မနေ့ကနဲ့ ဒီနေ့မှာ hit rate တွေ အဆ မတန် တက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရင်က ပုံမှန် အများဆုံးမှ 100 ကျော်လောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ နှစ်ရက်မှာ ရှစ်ရာကျော်ဖြစ်ပြီး shinstat counter ကလည်း များလို့တဲ့ ဆက် count မလုပ်ပေးတော့ဘူး။
ဒါနဲ့ သုံးလက်စ tinycounter ကများမှားနေလားလို့ Sitemeter ကိုတင်ထားတော့လည်း hit တွေ ဆက်တက်နေတာကို တွေ့ပါတယ်။ ဆရာသော်တာဆွေပြောသလို ဘိုဘိုးအောင် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကိုလာပြီး ဘရာစီယာနှစ်ထယ် ၀ယ်သွားတယ် ဆိုတဲ့ အံ့ဘွယ်ဘနန်း ပို့စ်မျိုးလဲ မရေးမိပါဘူး :D
သဉ္ဇာ - Thinzar - 8/26/08, 5:14 PM
သဉ္ဖာ့ရဲ့ပိုစ့်တွေ wesheme ရဲ့ feed roll မှာ ပါလာတော့ အရမ်းကို ၀မ်းသာတာ။ အမြဲကလည်း မရေးဖြစ်တော့ သူများတွေ refer လုပ်မှဘဲ visitor တွေ ရောက်ရောက်လာတာ။ "တကယ်ကြိုက်တယ်" ဆိုတာလေး ဖတ်လိုက်ရတော့ ဘယ်လို ၀မ်းသာသွားမှန်း မသိဘူး။ ဘလော့ဂ်က ရေးသာရေးနေတာ။ မှန်မှန်လည်း သိပ်မရေးဖြစ်တော့ ဖတ်တဲ့သူမှ သိပ်ရှိပါ့မလားလို့။ တစ်ခါတစ်လေ စာရေးပြီး ခေါင်းစဉ်ရောက်ရင် တစ်တစ်သွားတယ်။ စိတ်ထင်တာ ပေးလိုက်တယ်။ ခုတော့ ခေါင်းစဉ်ရဲ့ အရေး ပါပုံကို သိပါပြီ။ :-) သဉ္ဖာလည်း ဘလော့ဂ်သာ မှန်မှန် မရေးတာ hit တော့ မှန်မှန် ကြည့်တတ်တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ကြိတ်ပျော်နေတာ။
Andy Myint - 8/27/08, 1:11 PM
တားလည်း အတိဝူးလေ ကိုကြီး ထွန်းခိုင်ရဲ့။
ဒါတော့ ဘလောဂါ တော်တော်များများပဲလေ ညီမသဉ္ဇာရေ။ ရောင်းကောင်းရင် ပျော်နေကြတာပဲ။ သူများကိုသာ ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းစဉ်ကို ဘာပေးရမှန်း မသိလို့ တိုတို တုတ်တုတ် တည့်တိုးတွေပဲ ပေးလိုက်တာများတယ်။ လှတပတ လုပ်မနေဖြစ်ဘူး။
Dr. Nyan - 8/30/08, 3:04 AM
ကိုAndyရေ..Idea လေးကောင်းပါတယ်။ အောက်ကတခြားဖတ်ရန်..လေးကတော့ ဖြုတ်လိုက်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း cboxလက်သရမ်းတွေကြုံရပြီးတော့ လူကောင်းသူကောင်း blogger တွေညီညွတ်ချစ်ခင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာပါတယ်။ မိသားစုပျော်ရွှင်ပါစေ။
megumi - 8/30/08, 3:07 AM
megumi - 8/30/08, 3:10 AM
ရေးစရာမရှိရင် ဆားပဲချက်ချက် ဘာပဲလုပ်လုပ်
ပြဿနာကို ဘာမှမသိတဲ့ သူတွေက အထင်လွဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့ ။
ကို ဘာလို့ ထပ်ဖြစ်ချင်ရတာလဲ။
အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စမှာ ကျမတယောက်တည်း လွန်တာလား ပြောပါဦး။
ကျမရေးတဲ့ မေတ္တာာရပ်ခံခြင်းဆိုတဲ့့ post ကိုကော သေသေချာချာ ဖြေရှင်းပြီးပြီလား။
Sun Aug 03, 09:50:00 AM 2008 က ရှင် COMMENTS ရေးသွားတာကို မှတ်မိမှာပါနော်။
[ Blogger Andy Myint said...I hav said enough. Be cool. Cheers! ဆို] ရှင် ရေးထားတာပါနော်။
ကျမက ရှင် အဲဒီလိုရေးထားတော့ ကိစ္စတွေ ပြီးပြီလို့ ထင်ခဲ့မိတာ။
ကျမရဲ့POST မှာအသေအချာရှင်းပြပြီးသားနော်။ လူတိုင်းက ကျမကို မုန်းစေချင်တာလား ရှင်က။ အများအမြင်မှာတော့ ရှင်ကမှန်တယ် ကျမကမှားတယ်လို့ ဖြစ်အောင် ဘာဖြစ်လို့ လုပ်ချင်ရတာလဲ။ ရှင်လူကြီးလူကောင်းဆန်မယ်လို့ ကျမက ထင်ထားတာ။ လိုရင်းပြောရအောင်။
ရှင်မကျေနပ်ဘူးဆိုရင် POST တင်မနေပါနဲ့။
ရှင်နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ ရမယ့် ဖုန်းကိုပေးပါ(Mail Addressပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။)
၊ကျမကတော့ မိန်းခလေးဖြစ်လို့Phone No ကို စပြီးမပေးနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်သူကမှန်တယ်၊ မှားတယ်ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြားသိရတာပေါ့။
Dr. ဥာဏ် - 8/30/08, 1:15 PM
ခွင့်လွှတ်ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်။ ရေးမိပြီးမှကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘဲနဲ့..ဆိုပြီးနောင်တရနေမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးဆူတာလည်းမနက်စောစောစီးစီးခံရပြီးပြီဗျို့.. :cry
Andy Myint - 8/30/08, 1:21 PM
မိန်းကလေးရေ ဒီလောက် သောက်ပြဿနာ များမယ် ဆိုရင် ဘလော့ရေးရတာ ပျော်စရာ မကောင်းတော့ပါဘူး။ မင်း ကိုယ့်ကို ဒီလို လာပြီး ရန်တွေ့တာ ကိုယ့်တို့ မိသားစု အတွက်တော့ အမင်္ဂလာပါပဲ။ ဘာနဲ့ တူလည်းဆိုတော့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အေးအေးချမ်းချမ်း နေနေတာ အိမ်ရှေ့မှာ လာအော်ပြီး ရန်ဖြစ်သလိုပါပဲ။
မင်းပို့စ်ကို လင့်တာ မလင့်တာကိုလည်း မင်းပဲ စပြီး ရေးတာပဲ။ မကြေမလည် ဖြစ်နေတာလည်း ကိုယ်တို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မင်း ဟုတ်မဟုတ်တော့ မင်းပဲ သိမှာပေါ့။ ကိုယ်တို့က ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ ပျော်နေတဲ့ သူတွေပါ။ ဘယ်သူမှားတယ် မှန်တယ်လည်း ကိုယ့်အနေနဲ့ ပြောစရာ မရှိပါဘူး။ လူတိုင်းကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်တယ် ထင်မှာပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ သိချင်လည်း သိမှာပေါ့။
ကိုယ့် ပို့စ်ထဲမှာ တခြား ပို့စ်တစ်ခုကို လင့်တာလည်း ဒီတစ်ခါမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ် ဒီလိုပဲ လင့်လာတာ ဖတ်နေကြသူတွေ အသိပါပဲ။ ကိုယ့် ဘာကိုယ် ဘာလင့် လုပ်လုပ် မင်း ကိုယ့်ကို ပြောစရာ လိုတယ် မထင်ပါဘူး။ မင်းပို့စ်ကို မလင့်တော့ရင် ပြီးတာပဲ မဟုတ်လား။
ဒီဘလော့က များသော အားဖြင့် ကိုယ့် မိသားစုအကြောင်းရေးတဲ့ ဘလော့ပါ။ ကတ်ကတ်လန် ရန်တွေ့တာတွေနဲ့ မလိုက်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခါ ဒီလို လာပြောရင် ဘာမှ မဖြေရှင်းဘဲ ဖြတ်ပစ်လိုက်မှာပါ။ မင်းဆီမှာ မင်းလည်း ကြိုက်တာရေးပါ ကိုယ် ဂရု မစိုက်ပါဘူး။
Andy Myint - 8/30/08, 1:26 PM
Dr. Nyan (သို့မဟုတ်) `Dr.Nyan´ ဆိုသူ ခင်ဗျား ကျွန်တော်က ဒီလိုပဲ ကိုယ့် ဘလော့မှာ Hit များအောင် ပို့စ် အဟောင်းတွေကို `တခြားဖတ်ရန်´ ဆိုပြီး ရံဖန်ရံခါ လင့်လေ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းကို အခုမှ ဖြေရှင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ `Hit တစ်သိန်း အမှတ်တရ ´ မှာ ရေးဖူးပါတယ်။ ဒီပို့စ် တစ်ခုတည်းကိုမှ ဒီလို လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပို့စ်ကလည်း Feed Roll အကြောင်း ပြောတာဆိုတော့ ဆိုင်လို့ လင့်ထားတာပါ။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ပြန်ဖြုတ်မပေးနိုင်တာကိုတော့ စိတ်မရှိပါနဲ့။ အခုလို အကြံပေးတာလည်း အထူး ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
စာလုံးပေါင်း မှားသွားလို့ ပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။
Andy Myint - 8/30/08, 7:18 PM
တောင်းပန်စရာ မလိုပါဘူး ဒေါက်တာဉာဏ်ရယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးကို စေတနာထားပြီး ရေးမိတာပဲ။ အမျိုးသမီးက ဆူပဲ ဆူတာလား `ဂေါက်´ မခံရဘူးလား ဟီးဟီး။
dare2fight - 9/6/08, 4:51 AM
Hi Ko Andy !!!
I fully support you. Normally I come to this blogaleast4or5timesaday.
As your posts are good and also because of your FEED ROLLS. I can findalot of good blogs from you. So, for me, you blog is also useful for me use as "Blog Digest".
For recent incident(i think i used correct term), for my humble opinion, she's way too sensitive. And also annoying and SEEKING ATTENTION.
I love your blog. Great Job Ko Andy.
Andy Myint - 9/6/08, 11:52 PM
Dare you say, huh ? Thanks. You are right. I knew it. Just didn't want to say in that way.